‘अ,ख्तियारले पद पार्टी हेरेर होइन, कानुनबमोजिम का,र्वाही गर्नुपर्छ’ …हेर्नुहोस!::Point Nepal
‘अ,ख्तियारले पद पार्टी हेरेर होइन, कानुनबमोजिम का,र्वाही गर्नुपर्छ’ …हेर्नुहोस!
काठमाडौं : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले ग,ल्ती गर्नेलाई का,र्वाही गर्दा पद र पार्टी हेर्न नहुने बताएका छन्। प्र,तिनिधिसभाको शून्य समयमा बोल्दै नेता रावलले अ,ख्तियार दु,रुपयोग अ,नुसन्धान आयोगले पद पार्टी, पृष्ठभूमि हेरेर का,र्वाही गर्न नहुने बताएका हुन्।
‘अ,ख्तियार कुनै राजनीतिक आ,डमा चल्न हुदैन’ उनले भने, ‘दो,षीलाई नेपालको का,नुनबमोजिम का,रबाही गर्नुपर्छ।’ का,र्बाही गर्दा कुनै व्यक्तिलाई अ,दालतले नि,र्दाेष ठहर गरेपछि उसलाई दो,षी भन्‍न नहुने बताए। ‘ब,चाउन मन लागेको मान्छेलाई एउटा आवाज मन नलागेको मान्छेलाई अर्काे आजाव उठाउने गर्न मिल्दैन’ उनले भने, ‘नेपाली जनताले हामीलाई जुन विश्वास गरेर जनप्रतिनिधिको रूपमा सरकार सञ्चालन गर्न दिएका छन्, यसको स,दुपयोग गर्न सक्नुपर्छ।’
उनले राष्ट्रयको स्वाधिनता, अ,खण्डतालाई विषयमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए। ‘सुदूरपश्चिमको दार्जुलाको लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्रमा भारतीयले बनाएको पुल भ,त्काएको कुरा त सुनेका छौँ’ उनले भने, ‘तर, त्यो क्षेत्रमा भारतले व्या,पक सडक खनेको कुरा जनताले भनेका छन्। म सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।’ देश सानो भए पनि कुनै देशको राष्ट्रियता सानो नहुने उनले जिकिर गरे।
छिमेकी देशबाट सं,क्रमणको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोरियामा समेत फैलन पुगेकाले सरकारले त,दारुकता देखाउनु पर्ने उनले बताए। ‘चीनमा रहेको थेरै व्यक्तिलाई ल्याउँनसमेत सरकारलाई स,मस्या परेको थियो’ उनले भने, ‘कोरियामा नेपालीहरूको धेरै संख्या ठूलो छ। त्यसबाट हुने दु,र्घटना हुनसक्छ। त्यस विषयमा बेलैमा स,रकारले त,दारुकता लिन आवश्यक हुन्छ।’